Ịdị No .: HL461
Head ihe: aluminum alloy
The Richina akara e mere maka na ọkụ eletrik na-atụ anya na elu-edu atụmatụ na anwụ ngwa ngwa. Nke a Aluminium snow Pusher bụ fechaa na kwagaa buru ibu nke snow na onye ọ bụla ngafe. na Aluminium snow Pusher bụ a sturdy ngwá ọrụ ahụkebe uru. Isi, Aluminium snow Pusher agụba akụkụ: 460 * 230mm, Agụba Ihe Aluminium, Aluminium snow Pusher n'ozuzu ogologo bụ 1300mm. Ọ bụrụ na ị chọrọ a Aluminium Snow Pusher dabara maka mail iji anyị nwere ike juru n'ọnụ ha ọ bụla na a katọn.
Inogide Aluminium Snow shọvel , n'ozuzu ogologo 1300mm
Snow shọvel aluminum agụba, size 460 * 230mm
snow shọvel na ntụ ntụ ntekwasa ígwè handle
Agụba na-ejizi jikọọ site kposara
-Achọ ezigbo Aluminium Snow Pusher Manufacturer & soplaya? Anyị nwere a dum nhọrọ nke na-ahịa na-enyere gị na-okike. All nke níle Önwa Snow shọvel bụ àgwà na-ekwe nkwa. Anyị bụ ndị China Mmalite Factory nke Mail Order Snow Pusher. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Aluminium Aka Snow koo
Garden Ngwá Ọrụ Snow koo
arọ-oru Snow ahịhịa
naa Snow remover
ụlọ Snow akpụcha
Snow ahịhịa N'ihi Car
Snow ahịhịa Ice akpụcha
Snow ahịhịa na Ice akpụcha
Snow ahịhịa na-akpụcha
Snow nhicha Ngwá ọrụ N'ihi na Car
Snow mwepụ ahịhịa
Snow mwepụ Equipment
Snow mwepụ Tools
Snow Ngwá ọrụ
Triangle Snow akpụcha
Kọmpat Aluminium Car Snow shọvel
Best Snow mwepụ shọvel na atụkwala egwu Steel emefu
Telescopic Snow shọvel maka Car na ụfụfụ adịgide
Long emefu n'akụkụ ụzọ Ice akpụcha
Sport Utility Car Snow shọvel na Aluminium Agụba